तपाई को राशीफल (बिहिबार २०७६ मंसिर १२) – तपाईं सबैको दिन शुभ र मंगलमय रहोस -
तपाई को राशीफल (बिहिबार २०७६ मंसिर १२) – तपाईं सबैको दिन शुभ र मंगलमय रहोस
२०७६, १२ मंसिर बिहीबार ०४:०४ November 28, 2019 clickonLeaveaComment on तपाई को राशीफल (बिहिबार २०७६ मंसिर १२) – तपाईं सबैको दिन शुभ र मंगलमय रहोस
मेष : चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ
व्यस्त समय भए तापनि स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। तपाईंका हातबाट सजिलै धन खर्च भए तापनि – तपाईंका भाग्यशाली ताराले आर्थिक लाभ बनाइ रहनेछन्। तपाईंको हँसिलो प्रकृतिले वरिपरिको वातावरण उज्यालो पार्नेछ। तपाईंको हावी मनोवृत्तिले आफ्ना सहकर्मीबाट आलोचना हुनेछ। टाढाको यात्रा आरामदायक हुनेछैन – तर महत्त्वपूर्ण सम्पर्क बनाउन मद्दत गर्नेछ। धेरै दिनपछि तपाईं र तपाईंको जोडी फेरि एकअर्काको प्रेममा पर्नु हुनेछ।
वृष : इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो
व्यस्त समय भए तापनि स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। तपाईंले आज राम्रो पैसा कमाउनुहुनेछ – तर खर्चमा वृद्धि हुनाले तपाईंलाई बचाउन गाह्रो पर्नेछ। भावनात्मक आश्वासन खोज्नेहरूको सहायता गर्न आफुभन्दा ठूला मान्छे आउने छन्। तेस्रो व्यक्तिको हस्तक्षेपले तपाईं र तपाईंको प्रिय बीच तनाउ सिर्जना गर्नेछ। सहकर्मी र वरिष्ठहरूले पूर्ण सहयोग दिएकोले कार्यालयमा काम छिट्टो हुनेछ। आज तपाईंले आफ्नो जोडीलाई गलत हो भन्नाले पूरा दिन विरक्तलाग्दो हुन सक्छ।
मिथुन : का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह
राम्रो स्वास्थ्यको लागि लामो पैदल यात्राको लागि बाहिर जानुहोस्। तपाईंले भरोसा गरेको कसैले तपाईंलाई पूर्ण सत्य नभनेको हुन सक्छ – तपाईंको अरूलाई विश्वस्त गर्ने क्षमताले आउने समस्याहरूको समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ। आफ्नो दृष्टिकोणमा इमानदार र सही हुनुहोस् – तपाईंको सङ्कल्प र कौशलले परिचय प्राप्त गर्नेछ। तपाईंको आज आफ्नो जोडीसँग राम्रो कुराकानी हुनेछ, र एक-अक्काको लागि कति प्रेम गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने महसुस हुनेछ।
कर्कट : हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो
तपाईंको दिने मनोवृत्तिको फल प्राप्त हुनेछ किनकि तपाईं शंका, निराशा, विश्वासको कमी, लोभ, आसक्ति, घमण्ड र डाह जस्ता धेरै दोषबाट मुक्त हुन सक्ने सम्भावना छ। घरेलु कामले तपाईंलाई अधिकांश समय व्यस्त राख्नेछ। आफ्नो ऊर्जा र आवेगको कायापलट गर्न खुशियाली यात्रामा जाने सम्भावना छ। कसैको लागि व्यापार र शिक्षा लाभ हुनेछ। बाँकी रहेका समस्याहरू छिट्टै नै समाधान गरिनु पर्ने छ र तपाईंले कहींबाट सुरु गर्नु पर्नेछ भनेर याद गर्नुहोस् – त्यसैले सकारात्मक विचार लिएर आजैबाट प्रयास सुरु गर्नुहोस्। एउटा सानो प्रयासले, आजको दिन तपाईंको वैवाहिक जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिन बन्न सक्छ।
सिंह : मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे
धेरै चिन्ता र तनाउले उँचो रक्तचाप हुन सक्छ। किन्न बाहिर जानु अघि तपाईंसँग भएका वस्तुहरूको प्रयोग गर्नुहोस्। आफैलाई ज्यादै पुलपुल्याउने र सबैभन्दा आनन्द आउने कुराहरू गर्नको लागि राम्रो दिन। लामो समय पछि आफ्नो मित्रसँग भेट हुने सोचेर गुल्टिंदै गरेको ढुँगा झैं तपाईंको मनको ढुकढुकी बढ्न सक्छ। कसैको लागि व्यापार र शिक्षा लाभ हुनेछ। आफ्नो जीवनसाथीले तपाईंलाई सबैभन्दा खुशी व्यक्ति बनाउन आज धेरै प्रयास गर्नेछन्।
कन्या : टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो
केही मानसिक दबाब भए तापनि स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ। पारिवारिक जिम्मेवारी बढ्नेछ र तपाईंको मनमा तनाउ ल्याउनेछ। प्रेम वसन्त जस्तै हुन्छ; फूल, हावा, घाम, पुतलीहरु। तपाईंले आज रोमान्टिक कुतकुती महसुस गर्नु हुनेछ। महत्वपूर्ण व्यापार निर्णय गर्दा अरूको दबाबमा नआउनुहोस्। आज तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीसँग हुँदा कस्तो महसुस गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाउनु हुनेछ। हो, तपाईंको जोडी त्यो जीवनसाथी हो।
तुला : र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते
मित्रहरूले सहयोग गर्नेछन् र तपाईंलाई खुसी राख्नेछन्। पुराना साथीहरू समर्थक र सहयोगी हुनेछन्। तपाईं प्रेममा बिस्तारै तर निरंतर जल्नु हुनेछ। आज काममा कसैले तपाईंलाई राम्रो कुरा खान दिन सक्छ। आज तपाईंको जोडीले तपाईंको आवश्यकतालाई सन्तुष्ट गर्न अस्वीकार गर्न सक्छ, जसले गर्दा अन्ततः तपाईंलाई निराशा हुन सक्छ।
वृश्चिक : तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु
तपाईंको धेरै भरोसा र सजिलो काम गर्ने समयले तपाईंलाई आज आराम गर्नको लागि पर्याप्त समय दिएको छ। तपाईंको निवेश र भविष्यको लक्ष्यबारे गोप्य हुनुहोस्। तपाईंको ज्ञानको तिर्खाले नयाँ मित्र बनाउन मद्दत गर्नेछ। आफ्नो प्रियको। आज अनुभवी मान्छेसँग मिलेर तिनीहरूबाट केही सिक्नुहोस्। तपाईंको जोडी अरूको प्रतिकूल प्रभावमा फँस्न सक्छ र तपाईंसँग झगडा गर्नेछ, तर तपाईंको प्रेम र दयाले सबैलाई मिलाउनेछ।
धनु : ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे
तपाईंले आराम गर्न सक्ने दिन हो। तपाईंका मांसपेशीलाई राहत दिन तेलले आफ्नो शरीरको मालिश गर्नुहोस्। टाढाका आफन्तले आज तपाईंसँग सम्पर्क गर्नेछन्। तपाईं आज आफ्नो वरिपरि सबैतिर आफ्नी प्रियतमाको प्रेम महसुस गर्नुहुनेछ। यो एउटा सुन्दर प्यारो दिन हो। यदि तपाईंले लामो समयदेखि काममा कसैसँग कुरा गर्ने प्रयास गर्नु भएको छ भने, आज तपाईं भाग्यशाली हुन सक्नु हुनेछ। विवाह आशिष् हो, र तपाईंले आज यसको अनुभव गर्नु हुनेछ।
मकर : भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि
आध्यात्मिक जीवनको लागि जरूरी भएको तपाईंको मानसिक स्वास्थ्य कायम राख्नुहोस्। राम्रो नराम्रो सबै दिमागको माध्यमबाट आउने हुनाले मन जीवनको द्वार हो। यसले जीवनका समस्याको समाधान गर्नमा मद्दत गर्छ र चाहिएको प्रकाश प्रदान गर्दछ। पारिवारिक जिम्मेवारी बढ्नेछ र तपाईंको मनमा तनाउ ल्याउनेछ। प्रियको बिना तपाईंको समय बित्न गाह्रो पर्नेछ। आज अनुभवी मान्छेसँग मिलेर तिनीहरूबाट केही सिक्नुहोस्। आज आफ्नो जोडी तपाईंको लागि अति व्यस्त हुन सक्छन्।
कुम्भ : गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द
रमाइलो गर्न बाहिर जानेहरूको लागि सरासर खुशी र आनन्द मिल्नेछ। तपाईंले जानेका मानिसहरूको माध्यमबाट आयका नयाँ स्रोतहरू उत्पन्न हुनेछन्। साँझमा चलचित्र-थिएटर वा आफ्नो जोडीसित खानाले तपाईंलाई तनाउमुक्त र राम्रो मुडमा राख्न सक्छ। आफ्नो प्रियसँग तपाईंको व्यक्तिगत भावना रहस्य साझेदारी गर्ने यो सही समय होइन। तपाईंले निराशा भोग्नुहुनेछ – किनकि तपाईंले अपेक्षा गरेका पहिचान र पुरस्कार विलम्वित हुनेछन्। आज तपाईंको जोडी आफ्नो कामसँग यति आशक्त हुन सक्छ जसले गर्दा तपाईंले उदास महसुस गर्नु हुनेछ।
मीन : दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि
शारीरिक पीडा र तनाउ सम्बन्धित समस्यालाई नकार्न सकिंदैन। एउटा नयाँ आर्थिक सम्झौता तय हुनेछ र नयाँ पैसा प्राप्त हुनेछ। आफन्तहरू र साथीहरूलाई तपाईंको आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नदिनुहोस्, नत्र तपाईंले चाँडै आफ्नो बजेट उँचो पाउनु हुनेछ। आज तपाईं रोशनीमा हुनुहुनेछ – र सफलता तपाईंको सामर्थ्य भित्रै छ। नयाँ विचारहरूलाई जाँच्ने सही समय। आज आफ्नो जोडीले तपाईंको पीडा क्षण मै निकाल्न सक्छन्।
तपाईं सबै को दिन शुभ र मंगलमय रहोस्
अर्घाखाँची बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या १२ पुग्यो
महिला हिंसा अन्त्यका लागि सामाजिक दृष्टिकोणमै परिवर्तन ल्याउनुपर्छः मन्त्री गुरुङ
तपाईं को आजको राशीफल (सोमबार) – तपाईं सबै को दिन शुभ र मंगलमय रहोस
२०७५, ३० पुष सोमबार ००:५३ January 14, 2019 clickon
तपाईंको आजको राशीफल ( मङलबार २०७६ भाद्र ३१ ) – तपाईं सबैको दिन शुभ र मंगलमय रहोस
२०७६, ३१ भाद्र मंगलवार ००:३१ September 17, 2019 clickon
तपाईं को आजको राशीफल ( बिहीवार) – तपाईं सबै को दिन शुभ र मंगलमय रहोस्
२०७५, ३ श्रावण बिहीबार ००:४० July 19, 2018 clickon
किन सांसद दीपक मनाङेले एन्फा कास्की अध्यक्ष गुरुङलाई मुक्का हिर्काए?? पढनुहोस
आखिरकार के रहेछ ८ जना भारतिय पर्यटक हरुको मृत्‍यु को कारण ???
बेलायती राजकुमार ह्यारी सधै का लागी राजपरिवार त्यागी बसोबास गर्न क्यानडा पुगे
मन्दिरबाट फर्किएका यात्रु चढेको आइचर गाडी दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या सात पुग्यो [अपडेट]
यस्तो छ आज (बुधबार २०७६ माघ ८) को राशीफल
यस्तो छ आज (मङलबार २०७६ माघ ७) को राशीफल
नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको दण्ड जरिवानासम्बन्धी प्रावधान हटाउने विषयमा सहमति
उपसभामुख डा शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा
यस्तो छ आज (सोमबार २०७६ माघ ६) को राशीफल
अग्नी सापकोटलाई सभामुख पदका लागी उम्मेदबार बनाउने निर्णय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को
गायिका आस्था राउतलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं द्वारा प्रहरीलाई अनुमति
अमेरिकी दूतावास द्वारा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कुनै सैन्य गठबन्धन नभएको जानकारी
शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा रवि लामिछाने अदालत द्वारा निर्दोष ठहर
एक सय छ वर्षका पुननारायण श्रेष्ठको मोतियाविन्दुको सफल शल्यक्रिया, पुरा पढनुहोस
यस्तो छ आज (अाईतबार २०७६ माघ ५) को राशीफल
© नेपाल सटही दर - clickonnepal.com
©clickonnepal.com 2018-2019 | Theme: News Portal by Bikashsoft Technology.